Ndị Mashup | Martech Zone
Tuesday, February 21, 2006 Tọzdee, Ọktoba 23, 2014 Douglas Karr
Izu a a na m ano na mbido mbu Ogige Mashup ugwu Mountain, CA. Nkọwa nke a mashup dị ka kwa Wikipedia bụ 'websaịtị ma ọ bụ ngwa weebụ nke na-agwakọta ọdịnaya sitere na ebe karịrị otu'. Maka m, nke a pụtara ngwa ngwa web jikọtara ọnụ. N'afọ gara aga ma ọ bụ karịa, emeela m ọtụtụ 'Mashups' ma ọ bụ tinye aka n'ọtụtụ Mashups.
Bịa ogige mbụ, agbanyeghị, abụrụla ahụmahụ dị ịtụnanya. Nzukọ na ndị mmepe nnukwu na obere yana ụlọ ọrụ ndị na-akwọ teknụzụ dị egwu. Ọ bụ ezie na e liri m n'ime ime Silicon Valley, ana m amalite ijide ahụhụ ahụ! Web 2.0 na-abịa. Ikwesiri inwe obi uto banyere ya n'ihi na oputara mmepe ngwa ngwa, nsogbu di ole na ole ibubata ngwa ahia na ahia di mfe.
Coolfọdụ ihe dị mma:
Ihe omume.com - nke a bu ngwa oru di egwu nke ewuru na evdb (Ihe omume na ebe a gha eme ihe) API. Offọdụ n'ime ojiji bụ n'ezie dị ịrịba ama… ihe atụ i nwere ike bulite gị iTunes play ndepụta ma na-azụ a kalenda nke ihe ndị metụtara ha. CHAỊ. Mmepe ọbụna mepụtara IM bot na i nwere ike ịjụ ajụjụ. (Ihe na NYC Tonight? Na ọ na-abịa azụ na niile nke ihe ndị mere na New York City n'abalị a).
Yahoo! na Google na-agbanye ụwa GIS ihu na mbupute mmepe nke mmepe API Ngwaọrụ maka ihicha adreesị, ịkpụ n'okirikiri, na nkewa. Arụrụ m onye na-ere ahịa afọ 5 gara aga na-emefu ọtụtụ narị puku dollar maka ngwaọrụ dịka nke a dị ugbu a n'ịntanetị maka onye ọ bụla iji.
ifeanyichukwu - ụlọ ọrụ a arụọla ngwa nke na-adọwa uwe akwa ụlọ ọrụ ụgbọ elu ma tinye atụmatụ ọnụahịa crappy n'ebe ahụ ka ụwa wee hụ! You na-enyocha ego ụgbọ elu ma na-eche ihe kpatara na ọ naghị agbanwe agbanwe? Nke a ụmụ okorobịa ngwá ọrụ nwere ike igosi gị na ị na-egbusi oge gị… ọ nwere ike ọ gaghị agbanwe agbanwe!
StrikeIron.com - igwe na-ere ahia nke web maka ngwa mmemme nke ngwa.
mFoundry.com - ndị a bụ ndị nnabata nke ijikọ ekwentị. Ha gosipụtara usoro ebe m nwere ike ịlele etu ngwa ngwa ekwentị m si arụ ọrụ na ekwentị site na ntanetị weebụ!
Mozes.com - ọzọ Mobile tech mashup, ụmụ okorobịa a nwere ụfọdụ ihe dị mma. Ugbu a ha nwere sistemụ a tọhapụrụ ebe ị nwere ike izigara ndị na - akpọ oku na redio nke redio iji chọpụta abụ a na - akpọ na redio.
Na-agba ọsọ.com - iji Google Maps, ndị folks a wuru interface maka ndị na-azụ ọzụzụ, ndị na-agba ịnyịnya ígwè, ndị ọgba ọsọ, wdg. Ọ bụghị naanị ịkọpụta kilomita, kamakwa igosi mgbanwe ngbanwe ndị dị n'ụzọ !!!
Mapbuilder.net - Nwoke a na - arụ ọrụ n’ime ụlọ ndọba ụgbọala ya na oge ya ma wuo GUI interface iji wuo map nke gị site na iji Google ma ọ bụ Yahoo! Ọbụghị naanị nke ahụ, mana ọ na-emepe nke ya API nke ahụ bụ ọnyà ma na-agwa nke ọ bụla n'ime GIS API. Frickin amamiihe !!!
Microsoft, Salesforce.com, ExactTarget, Zend, PHP, MySQL, Yahoo !, Google, eBay, Amazon… umuaka nwoke nile no. Ihe dị mma, n'agbanyeghị… bụ na ha nọ ebe ahụ iji nyere ma duzie 'ndị nwe' ahụ, ọ bụghị ịmanye teknụzụ ha na ibe ha. Ahụghị m ahịa ọ bụla na-ere ahịa. Ogige ahụ dum nọ ebe ahụ n'ezie iji nweta ụlọ ọrụ na ndị mmepe ka ha dịrị n'otu ịmalite usoro 'Mashup'.
Izu na-egbu egbu! Enwere m ọtụtụ ihe ịlaghachi na ụlọ ọrụ m ka anyị na-aga n'ihu ịgbasa API nke anyị. Ọzọkwa, ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ 'Mashup' ngwa anyị na ọtụtụ ndị ọzọ. Amaghị m ụra ole m ga-echi n’ọnwa ma ọ bụ ọnwa na-abịa abịa!
Maka ama ndi ọzọ, gaa Mashupcamp.com. I nwekwara ike ịdebanye aha n'oge maka Mashup na-esote afọ! Aga m ahụ gị ebe ahụ.
Tags: eme iheofufegoogle +onye na-ese ihegwakọọmashup mara ụlọikwuuUdochukwuugwu lee anyamozesagba ọsọgbasiaronyahoo
Mepụta nsogbu, wee kwụọ ụgwọ maka nsogbu ahụ
Cleandị Ọcha data